PEACEFUL PA: သစ္စာရှိတဲ့ ခွေးကလေး
ကွယ်လွန်သူ အထက်လွှတ်တော်အမတ် `ဂျော့၊ ဂရေဟမ်၊ ဗက်စ် Senator George Graham Vest က စကားမပြောတတ်တဲ့ ခွေးကလေးတကောင်အတွက် ချေပပေးတဲ့ စကားဟာ အလွန်လှပပြီး သမိုင်းတွင်တဲ့ စကားလေး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဖြစ်ပုံကတော့ Missouri ပြည်နယ်၊ မြို့ကလေးတမြို့မှာ ရှေ့နေကလေးဘ၀နဲ့ ခွေးတကောင် အသတ်ခံရတဲ့အမှုကို ရှေ့နေလိုက်ပေးရပါတယ်။
အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဗက်စ်က တရားလိုဖြစ်ပြီး၊ နောင်မှာ ဆရာဝန်အလုပ်ကို ပြောင်းလုပ်သွားခဲ့တဲ့ အထက်လွှတ်တော်အမတ် Senator Francis M. Cockrell က တရားခံဖက်က အကျိုးတော်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ် ဗက်စ်ဟာ သက်သေထွက်ချက်တွေကို စိတ်မ၀င်စား၊ မှတ်ချက်လည်း မပေးပါ။ ဒါပေမယ့် အမှုနောက်ဆုံးနေ့မှာတော့ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းတဲ့ အသံနဲ့ အခုလို လျှောက်လှဲခဲ့ပါတယ်။
`လေးစားအပ်တဲ့ တရားသူကြီးမင်းတို့ခင်ဗျား၊ လောကမှာ အကောင်ဆုံးမိတ်ဆွေပင်လျှင် ရန်သူဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ကြင်နာစွာ ပြုစုစောင့်လျှောက်လာတဲ့ သားသမီးလည်း ကျေးဇူးမသိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အခင်မင်အရင်းနှီးဆုံးလူ၊ ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် စိတ်အချရဆုံးလူတွေပင်လျှင် ယုံကြည်မှုကို သစ္စာဖေါက်တတ်ကြပါတယ်။
`လက်ထဲရှိတဲ့ငွေဟာလည်း ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ တကယ်အလိုအပ်ဆုံးအချိန်မှာ အတောင်ပေါက်ပြီး ပျံသွားတတ်ပါတယ်။ လူတွေ လေးစားကြည်ညိုမှုကို ခံရတာဟာလည်း ယုတ်မာတဲ့စိတ်နဲ့ တိုက်ခိုက်တာ ခံရလို့ တခဏချင်းမှာ အစတောင် ရှာမရဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်အောင်မြင်နေတဲ့အချိန် ရှေ့မှာ လာရောက် ဒူးထောက် ဂုဏ်ပြုနေသူတွေဟာ ဆုံးရှုံးမှုတွေ ခေါင်းပေါ်ကျလာချိန်မှာတော့ ကိုယ့်ကို အပြစ်တင်တဲ့ ကျောက်ခဲတွေနဲ့ စပေါက်မယ့်သူတွေ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
`ကိုယ်ကျိုးရှာလွန်းတဲ့ လောကကြီးမှာ လုံးဝကိုယ်ကျိုးမရှာတဲ့သူ၊ ဘယ်တော့မှ မစွန့်ပစ်မသွားတဲ့သူ၊ ကျေးဇူးမကန်း၊ သစ္စာမဖေါက်တဲ့သူဆိုတာ သူရဲ့ခွေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“ခွေးဟာ ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ၊ ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ၊ ကျန်းမာသည်ဖြစ်စေ၊ ဖျားနာသည်ဖြစ်စေ သူ့သခင်နဲ့ အတူနေပါပေးတယ်။ လေပြင်းတွေတိုက်၊ နှင်းတွေ အကြီးအကျယ်ကျတဲ့ အေးစက်လွန်းတဲ့ မြေပြင်ပေါ်မှာတောင် သူ့သခင်နဲ့ အနီးဆုံးမှာ လာအိပ်သူပါ။ ကြမ်းတမ်းတဲ့ လောကရဲ့ ဘေးဒုက္ခတွေကြောင့် ရလာတဲ့ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေကို လျှာနဲ့လျက်ပေးတဲ့သူပါ။ အိပ်မောကျနေတဲ့ သူ့သခင် ဆင်းရဲသားကို ရှင်ဘုရင်တပါးအလား စောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်။ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေ အတောင်ပေါက် ပျံသွားတဲ့အချိန်၊ လေးစား အထင်ကြီးခံရတာတွေ တစစီကြွေသွားတဲ့ အချိန်တွေမှာလည်း နေဟာ ကောင်းကင်ယံမှာ သွားမြဲသွားနေသလို သူကတော့ တည်ကြည်နေမြဲပါပဲ။
“အခြေအနေတွေက- သူ့သခင်ကို လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက နှင်ထုတ်၊ အပေါင်းအဖေါ်မဲ့၊ အိမ်ယာမဲ့ဖြစ်နေချိန်မှာ သစ္စာရှိတဲ့ခွေးဟာ ဘာအခွင့်အရေးမှ မတောင်းဆိုပဲ၊ သူ့သခင်ကို ကာကွယ်မယ်။ ရန်သူတွေကို တိုက်ခိုက်မယ်။ နောက်ဆုံး သူ့သခင်သေသွားလို့ အလောင်းကို မြေမှာ မြှုပ်နှံပြီး တခြားသူတွေ အသီးအသီး ထွက်သွားကြချိန်မှာတောင် သခင့်မြေပုံဘေးမှာ သစ္စာရှိတဲ့ခွေးကလေးကို တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ သူ့လက်တွေကြားမှာ သူ့ခေါင်းကို ၀ပ်ထားမယ်။ ၀မ်းနည်းနေရှာပေမယ့် မျက်လုံးတွေကို ဖွင့်ထားရင်း သတိနဲ့ စောင့်ကြည့်ပြီး သေသည့်တိုင်အောင် သစ္စာရှိနေဦးမှာပါ။ ”
အခုလို ရှေ့နေရဲ့ ချေပစကားကို ကြားလိုက်ကြရတဲ့ ပရိတ်သတ်ထဲမှာ မငိုမိတဲ့သူဆိုလို့ နဲနဲပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ ထပ်ချေပစရာ မလိုတော့ပဲ အမှုနိုင်သွားပါပြီ။ တရားသူကြီးက တရားလိုအတွက် စီရင်ချက် ချက်ချင်းချ ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ ။
“Such Tribute DemandsaVerdict” – from “SWORD OF THE LORD” Vol. LXX. No. 6, March 12, 2004.
Posted by Papa at 1:26 AM
Labels: Reader, Story, သဘာဝ, ကျောင်းသုံးဖတ်စာ, ဆောင်းပါးတို
Kyaw August 17, 2012 at 10:55 AM
An Unusual Cat ထူးခြားတဲ့ ကြောင်တကောင်
ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ စစ်တိုက်ခြင်း Peace and War
မောရှေ ရဲ့ အံ့ဖွယ် အလုပ်သဘာဝ Amazing Data on Moses...
SKIN - အရေပြား
လက်ဆေးပါ - “Importance of Hand Washing”
စားသောက်ပုံ - Table Manners